परदेशी – ABC KHABAR
एबोर्सनको टेबलमा गोर्खाल्याण्ड –बी . पी. बजगाइँ [लेख शुरु गरिन अघि सानो नोट: धेरैले म्यासेन्जर र वाट्सएपमा सोधे, ‘तपाईं आजकल किन मौन?’ यो लेख मैले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा लेखेको हो| मेरो […]
August 15, 2017 News Desk परदेशी, बिचार, राजनीति, समाज
सौल, मे १४ नेपाली साहित्य समाज (नेसास), दक्षिण कोरियाको पाँचौ वार्शिकोत्सव भव्य रुपमा आइतवार सम्पन्न भएको छ। वार्सिकोत्सव समारोहबाट यल्जी विवशको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय नेसास,दक्षिण कोरियाको पुनर्गठन समेत गरिएको छ। […]
नबिन राई लोहोरुङ बेलायतमा ब्रिटिश गोर्खाज पुनर्बासको ब्यवस्थाले गोर्खा भर्ती बारे ठुलै बहसको बिषय बनेको छ। नेपालमा यस बारे छलफलको बिषय नठानिए पनि बेलायतमा गोर्खाज बारे गम्भिर प्रश्न उठेको थियो। […]
February 9, 2017 February 11, 2017 ABC Desk Job, अर्थ, परदेशी, बिचार, समाज
एविसि खबर न्युजर्सी अमेरिका । गैह्र आबसिय नेपाली संघको आसन्न चुनाब नजिकदै जादा नेतृत्वको पनि होडबाजी सुरु हुन थालेको छ । आफुलाइ अब्बल र सक्षम छु भनेर देखाउन विभिन्न संचार […]
अमेरिका । गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएन) राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको कन्फ्रेन्स कल वैठक सकिएको छ । गएको शनिवार संघका अध्यक्ष डा. केशव पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले अमेरिकाको न्युयोर्कलाई केन्द्र […]